OIDIUM (XAYRTA MAQAARKA) EE CANABKIISA: HABABKA XAKAMAYNTA FIRFIRCOON - CANAB
Oidiidiyadu waa cudur fungal ah.saameeya caleemaha iyo caleemaha. Haddii xaaladuhu wanaagsan yihiin, markaa waxay u aadeysaa inflorescences mana u ogalaan inay si buuxda u kobcaan oo ay u ruxaan.
Kareemada budada ah kuma faafinayaan caleemaha la qalajiyey iyo caleemaha, laakiin waxay ku nool yihiin oo keliya noolaha nool. Qeyb ka mid ah mycelium, oidiyum wuxuu ku yaalaa dillaac of jilif ah, on kelyaha iyo koofiyadaha halkaas. Cayayaanka cudurkaan wuxuu ku jiraa caleemaha, caleemaha oo idil. Wuxuu si dhaqso ah u badiyaa, wuxuu abuuraa kubado cusub, wuxuuna ku fidaa dhammaan baadiyaha, ka dibna wuxuu u dhaqaaqaa dhirta deriska ah.
Gobollada guga waa hore iyo diirimaad, xayrta budada ah ayaa dhaqdhaqaaqa horay u saameeya wuxuuna saameeyaa caleemaha yar yar ee koray. Cimilada qabow, cudurkani wuxuu kicinayaa marka caleemaha ay ka muuqdaan baadiyaha.
Waa muhiim! Isterobar ay saameeyeen oidiyuhu ma aha mid ku habboon isticmaalka, xitaa sida walxo cayriin ah oo khamri ah.
Wakiilka keena oidiyuhu waa fungus ah cirfiidka Uncinula. Nasiib-darrada noocan ahi waxay ku dhacdaa dusha sare ee canab. A patina-cad cad oo ku yaala dhirta waxaa la sameeyay iyadoo la isticmaalayo hyphae khafiif ah oo ku xiran dusha dhirta by suckers loo yaqaan appressoria. Si aad u nuugto cuntada, boqoshaada waxay ku galaan bakteeriyada xayawaanka. Unugyada ay saameeyeen waa ay dhintaan, samaynta miraayad madow ah.
Iyada oo ay ka caawiso dabaysha, koonfureedka fungus waxaa loo wareejiyaa meelaha canab ee aan weli infekshin. Xaaladaha ugu wanaagsan ee horumarinta cudurkan waa qoyaan iyo qoyaan ka sarreeya 80%, iyo sidoo kale hawo-mareenka liita ee goobta.
Ogow waxa fangasdaha loo isticmaalo beerta canabka ah si aad u ilaaliso dalaggaaga.
Wakhtiga masruufka Oidium waa 7-14 maalmood, iyadoo ku xiran heerkulka hawada. Conidia waxay horumarisaa ugu fiican +20 ° C, laakiin koritaankooda waxay bilaaban karaan +5 ° C
Macaanka canabka ee canabkuna wuxuu ka muuqdaa dhammaan qaybaha kor ku xusan:
duufaan-cagaar cad ayaa ka muuqda caleemaha, kuwaas oo ku faafa labada dhinac ee caleen;
Caleemaha waa la xoqay dhinaca geesaha, leexiyo, huruud isu beddela;
duufaantu waxay u muuqataa xargo, ubax, sida haddii lagu rusheeyey bur;
dhibco mugdi ah ayaa lagu sameeyay caleemaha;
unugyada caleemaha way madoobaan waxayna u dhintaan meelaha qaarkood.
Haddii fangasku si firfircoon u kobcayo, markaa tani waxay keeni kartaa xaqiiqda ah in:
inflorescences ayaa ku dhinta;
canabku uu saameeyey cudurka, ka hor qallaji;
Miraha yar yar oo la qallajiyo oo qallalan, miraha waa la soo bandhigaa.
Si aad uga takhalusatid oidiyoon on canab, waxaad u baahan tahay inaad qaadato tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loola dagaallamo cudurka.
Si looga fogaado sida muuqata xayrta budada ah, waxaad u baahan tahay inaad ka hortagto. Daryeel wanaagsan wuxuu kaa caawinayaa yareynta fursadda xagta udugga ah ee budada ah. Xilliga dayrta iyo gu'ga waxa fiican in la qodo dhulka hoostiisa. Waxaa sidoo kale wanaagsan in ay ku quudiyaan duurka leh Bacriminta potash-fosfate.
Si loo ilaaliyo canab, waxaa lagu daaweeyaa fungicides. Dad badan ayaa doorbida qalabka "Tiovit Jet." Haddii kala duwanaanta canabka ay tahay mid macquul ah, waxaa fiican inaad isticmaasho Topaz.
Waa muhiim! Qaadashada daawooyinka loo isticmaalo daaweynta neefsiga waa inay noqdaan 2 jeer ka yar kuwa daaweynta.
Talooyin waxtar leh si looga hortago cudurka:
Carrabka hoostiisa oo ka hooseysa canabku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, caleemo qallalan iyo laan nadiif ah waqtigooda.
Qalabka waa in la nadiifiyaa ka dib marka la jarayo.
Warshadu waa inaysan dhaafin. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo isu-dheellitirka dheelitirka.
Marka waraabiyo, waa wax aan loo baahnayn in biyo la oggolaado in uu galo qeyb ka mid ah baadiyaha ka sareeya dhulka.
Ha u oggolaanin inaad dhuuban tahay.
Habka bayoolojiga ee halganka wuxuu ka kooban yahay diyaarinta guga microflora saprophytic ka humus.
Waxaa sidan loo sameeyaa.:
In 100-litir foosto ku shub humus, sidaa darteed wuxuu qaatay qaybta saddexaad.
Buuxi biyo kulul ilaa +25 ° C
Ku dabool joornaalka iyo, si joogto ah u walaaq, sug 6 maalmood.
Maaddada, ee soo baxday, waa in lagu sifeeyaa faashad. Ku shub dareeraha falejada iyo ku buufin on caleemaha geedka canabka ah iyo caleemaha si looga hortago. Duufin dooro habeenkii ama maalmaha daruurta leh. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo microflora sida laba jeer xilli ciyaareed, adoo eegaya mudo ah todobaad. Haddii uu cudurku ku faafay badanaa, waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso xitaa kadib ubax.
Ma taqaanaa? Wixii diyaarinta hal dhalo oo khamri ah waxaad u baahan tahay 600 oo canab.
Inta lagu jiro Bisaylkiisa ee berry, wakiilada kiimikada ayaa ugu fiican in aan la codsan. Sidaa daraadeed, xal xashiishad ah (5 g halkii 10 litir oo biyo ah) ayaa kaa caawin karta joojinta cudurka mudo ah.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaatid sida loo ilaaliyo dalaggaaga cudurada iyo cayayaanka xilliga dayrta.
Daroogooyinka ku jira daroogada
Sulfur wuxuu u dhintaa dulin. Fangasku wuu nuugaa oo dhinto. Laga soo bilaabo oidium on canab ah ee daaweynta kala diri 100 g of sulfur ee biyaha (10 l), iyo ka hortagga - 40 g. Tani waa sida ugu fiican ee la sameeyo subaxda ama fiidkii, sida kuleylka caleemaha gubanaya iyo miraha. Habkani wuxuu ka shaqeeyaa heerkulka ka sarreeya +18 C Haddii heerkulku hooseeyo, waxaad isticmaali kartaa mukhaadaraadka ku jira daroogada, sida "CabrioTop."
Daroogooyinka laga bilaabo oidiyoon
Ka dib markaad ubaxdo, isticmaal daawooyinkaas laga bilaabo oidiyoon canab ah: "Skor", "Rubigan", "Topaz", "Bayleton". Waxaa sidoo kale jira "Fundazol", laakiin waxay waxtar u leedahay geedo yar yar. Laga soo bilaabo sannadkii hore "Horus" ama "Strobe" ayaa ka caawiya sida ugu fiican. Daawooyinkaan waxaa loo isticmaalaa cimilada qabow.
Akhri shuruucda beerashada iyo canab soo beertay guga.
Waxa kale oo jira habab caan ah oo lagaga hortago cudurka.:
3 tbsp. l soodhaha leh 4 litir oo biyo ah kuna dar 1 tbsp. l saabuunta dareeraha. Si dhakhso ah u dil canab.
Walaaq 1 kg oo ah qashin lagu qasay biyo kulul (10 l). U baahan tahay inaad ku adkaysato 5 maalmood, kareyso marmar. Ka hor inta aan la shaqeynin, ku dar sabbo dufan leh (30 g).
2 tbsp. laydh qallalan oo engegan 10 litir oo biyo ah karkaraya. Ka dib markii la qaboojiyo isku dar ah, biyo iyo buufin canab.
25 g oo toon ah oo toon ah oo la jarjarey 1 litir oo biyo ah. Maalin ay ku ridaan canab.
Korovyak waxay u baahan tahay in la buuxiyo biyaha 1: 3. Ka dib 72 saacadood, cadaadis la karkariyo oo biyo ku qulqulaya 3 jeer.
Waxaa jira noocyo canab ah oo adkaysi u ah cudurada fangas. Kuwani waa Aligote, Rkatsitic, Kishmish, Merlot, Sauvignon.
Ma taqaanaa? Waxaa jira in ka badan 10,000 oo kala duwan oo canab ah oo adduunka ah. Tani waa wax ka badan dhaqanka kale.
Oidium - fungus malignant, si deg deg ah u faafo dhammaan qaybaha kor ku xusan ee canab. Haddii aad qaadato tallaaboyin waqtigaa, khatarta cudurka ayaa si weyn hoos loogu dhigi karaa.